Miverina ny fitoniana politika : hanome asa hatramin’ny 6 000 ny orinasa maorisianina iray | NewsMada
Miverina ny fitoniana politika : hanome asa hatramin’ny 6 000 ny orinasa maorisianina iray
Anisan’ny voandalana tamin’ny fitsidihan’ny fioha Rajaonarimampianina sy ireo delegasiona, notarihiny tatsy amin’ny Nosy Maorisy ny fiverenan’ny mpampiasa vola eto amintsika indray. Eo koa ny fanamafisana ny fiaraha-miasan’ny firenena roa tonta.
Fantatra tamin’izany fa hiverina hampiasa vola eto amintsika, eny Ambohimangakely ny orinasa Maorisianina iray ka hampiditra mpiasa 2 500 amin’izao voalohany izao. Hiakatra ho 3 500 izany avy eo ka hahatratra hatrany amin’ny 6 000 any ho any. « Efa mipetraka ny fitoniana sy ny fahamarinan-toerana politika ary azo atao ny mampiasa vola any amintsika. Efa maro ireo mpampiasa vola vahiny ho avy. Midika izany fa atokisan’ny olona isika ary miverina eo amin’ny toerany i Madagasikara, aty amin’ny ranomasimbe Indianina sy eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena », hoy ny filoha Rajaonarimampianina, taorian’ireo fanaovan-tsonia samihafa sy fiaraha-miasa amin-dry zareo Maorisianina ny faran’ny herinandro teo. Notsiahiviny ny nahatafatsangana ny andrimpanjakana farany teo, amin’ny alalan’ny Antenimierandoholona.
Fanondranana katsaka sy kabaro hatramin’ny 2 000 t
Anisan’ny nohamafisin’ny filoham-pirenena amin’ireo Malagasy miasa sy monina atsy Maorisy izany ary niantsoany ny fiaraha-miasa. « Antsika rehetra ny fampandrosoana ny firenena. Efa miroso isika izao ka aoka hojerena ny tombontsoan’ny firenena », hoy ihany izy.
Ankoatra ny famoronana asa, hivelatra koa ny fiaraha-miasan’ireo mpandraharaha malagasy amin’ny any an-toerana. Eo, ohatra, ny hanondranantsika katsaka sy ovy ary tongolo. Manampy izany ny kabaro hatramin’ny 2 000 t. « Tokony ho vitantsika izany raha voahaja ny kalitao. Tombony ho anay ny fiarahana amin’ny filoham-pirenena tahaka izao, ahafahana mijery ny fiaraha-miasa », hoy ny mpandraharaha iray.
Etsy andaniny, hapetraka any Ehoala ny faritra ara-toekarena manokana (ZES) iarahana amin-dry zareo Maorisianina ary koa ny hamerenana aty amintsika ireo andramena, sarona tatsy amin’ny Nosy Maorisy.